Puntland oo gacanta ku dhigtay Shabakad dilal geystay - Awdinle Online
Puntland oo gacanta ku dhigtay Shabakad dilal geystay
Hawlgal qorshaysan oo Ciidanka Booliiska Gobolka Mudug ee Puntland ay ka fuliyeen Gaalkacyo, ayay ku qabteen shabakad ka tirsan Al-Shabaab oo dilal kala duwan ka gaystay gudaha magaalada, kuwaas oo ka kooban todoba xubnood.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka Booliiska, ayaa warbaahinta u xaqiijiyay, in gacanta lagu dhigay shabakaddii Al-shabaab u qaabilsanayd dilalka Gobolka Mudug, gaar ahaanna magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo ka kooban todoba xubnood, islamarkaana ay ku jiraan laba Sarkaal.
Shabakadda la qabtay ayaa qirtay in ay ka dambeeyeen dilal iyo qaraxyo kala duwan oo ka dhacay Gaalkacyo tan iyo sannadii 2018, waxaana weli ku socda baaritaan, sida ay sheegeen Saraakiisha Booliiska Gobolka Mudug ee Puntland.
Saraakiishu waxay sidoo kale tilmaameen, in ay dib ka shaacin doonaan magacyada xubnaha la qabtay, oo ay ku jiraan laba Sarkaal oo muhiim ah, kadib markii ay soo geba-gabowdo natiijada baarista, dabadeedna ay u gudbin doonaan maxkamad ciidan.
Previous articleHowlgallo ka socda Magaalada Kismaayo
Next articleMadaxweynaha xilka ka dagaya ee Mareykanka oo xilka ka qaaday Xoghayihii Gaashaandhigga